Bazi rezvehutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pazana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nemakumi mapfumbamwe kana kuti 29.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko VaNick Mangwana vachinyora padandemutande ravo reTwittwer vakati vanhu vatatu vainge vabatwa necoronavirus kuMashonaland Central rinova dunhu chete range rasara risina munhu ainge abatwa nechirwere ichi.
Vanhu vari kubva kuSouth Africa, Botswana neBritain kunyanya ndivo vari kubatwa nechirwere ichi. Vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru makumi mana nemana kana kuti 44,000.
Asi vanhu ava vashoma zvikuru pane vannge vachitarisirwa kuti vange vavhenekwa nehurumende yaiti yaitarisirwa kuvheveka vanhu zvuru makumi mana 40, 000 mukupera kwemwedzi wapera.
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa avo vakawedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba kwenguva isina kutarwa asi vachivimbisa kuzeya danho iri mavhiki maviri ega ega. Asi neSvondo havana zvavakataura kuruzhinji kunyangwe kwapera mavhiki maviri zvichireva kuti vanhu vachaenderera mberi vari mudzimba.
VaMangwana vatenda kuti hakuna zvati zvataurwa zviri pamutemo naVaMnangagwa. Mumwe chiremba, Doctor Brighton Chireka vanoti kuvhenkwa kwevashoma uku idambudziko guru sezvo chirwere chichizogona kunyanya kupararira iyo nyika isina zvipatara zvakakwana zvekurapa vanenge varwarisa.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 139, 000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vave kuda kusvika zviuru zvina kana kuti 4, 000. Vapora vanodarika zviuru makumi mashanu nezvisere kana kuti 58,000.
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu kana kuti kuti 6 million.
Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana kana kuti 100,000.
Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zvuru mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti 370,000 vapora vachidarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 nezviuru mazana mashanu kana kuti 2,5 million.